यस्तो हो नेपालको खास नक्सा	Postpati – News For All
पत्रपत्रिकाबाट २०७६ कार्तिक २६,मंगलवार प्रकाशित पढ्न लाग्ने समय : ३ मिनेट
कात्तिक २६, काठमाडौं । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई लिम्पियाधुरासम्म समेटेर नक्सा बनाउन सोमबार निर्देशन दिएको छ। कस्तो हुन्छ त त्यो नक्सा ?
यो खबर सुरेन्द्र काफ्लेले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् । नापी विभागले तीन वर्षअघि त्यो नक्सा बनाइसकेको छ (हेर्नुहोस् नक्सा)। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा बनाइएको समितिले पूर्ण नक्सासहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। त्यो सार्वजनिक नगरी थन्क्याइएको छ।
नेपाल सरकारले २००९ मा पूर्वाञ्चल र २०११ मा पश्चिमाञ्चलमा जनगणना गरेको थियो। त्यतिबेला हालको दार्चुला (तत्कालीन बैतडी) जिल्लाअन्तर्गत थियो। तत्कालीन ब्यास गर्खा (दरा) मा ६ गाउँ थिए। २०११ को जनगणनाले ब्यास गर्खाका ६ गाउँको घरधुरी संख्या चार सय ३४ तथा कुल जनसंख्या एक सय आठ सय १६ देखाएको छ।
अग्रज पत्रकार भैरव रिसालको नेतृत्वमा त्यस क्षेत्रमा २०१८ सालमा भएको जनगणनामा व्यास क्षेत्रका गुञ्जी, नाबी, कुटी, तिंकर र छाङ्रु गाउँको गणना गरिएको थियो। २०१८ साल यता लिम्पियाधुरामा नेपालको उपस्थिति शून्य छ। यो भूभागसहित त्यहाँका बासिन्दालाई भारतीय बनाइसकिएको छ। सुगौली सन्धिपछि नेपालको पश्चिम सीमा लिम्पियाधुरा भएको सीमाविद् पुण्यप्रसाद ओलीले बताए।
सरकारले ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र दस्ताबेजसमेत राखेर भारतसँग छलफलको ठोस प्रस्ताव बनाउने भएको छ। लेखक रतन भण्डरीको ‘लिम्पियाधुरा पुस्तक’ अनुसार सन् १८१७ फेब्रुअरीका दिन इस्ट–इन्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे. आदमले काठमाडौंस्थित आवासीय प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनरलाई पठाएको पत्रमा ‘काली नदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्ना चौतरिया बम शाहको दाबीअनुसार नेपालको ठहरिन्छ। तसर्थ त्यो ठाउँ नेपाल सरकारका अधिकारीलाई बुझाउनू’ भनी निर्देशन दिएका छन्।
ऐतिहासिक तिरोभरोका आधारमा समेत महाकालीको मुहान् लिम्पियाधुरा उल्लेख छ। जलविज्ञानका आधारमा लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदी लिपुलेकबाट आउने लिपुखोलाभन्दा दुईतीन गुणा ठूलो छ। सन् १८५६ पछि भने ब्रिटिस इन्डियाले नेपालको पश्चिमी सीमामाथि नक्सामार्फत अतिक्रमण गर्न थालेको थियो। कम्पनी सरकारले सन् १८५६ पछि प्रकाशित नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदीलाई कुटी याङ्दी र लिपुलेक पश्चिम गिरफुबाट आउने खाँयंक्ति (लिपुखोला) लाई काली लेख्न सुरु गरेको हो।
त्यसभन्दा पनि पूर्व कालापानीमा भारतले कृत्रिम नदी बनाएर काली नदी भन्दै नक्सा जारी गरेको हो।